Mahwendefa Ari Kuchinja Sei Maitiro Ekutenga | Martech Zone
Mugovera, July 7, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Kana zvirimo ndiMambo, saka UX inofanirwa kuve Mambokadzi. Nekukura kunoshamisa kwemafoni uye mahwendefa, ruzivo rwevashandisi (UX) runogona kuve nemhedzisiro yakakura pakukura kwekutengesa kunze kwehunhu hwezvinyorwa zvacho. Izvi zviitiko hazvichakwanise kurambwa uye zvinofanirwa kutorwa mukufungisisa paunenge uchinyatso kugadzirisa kuvepo kwako pamhepo.
Iyi infographic inobva Monetate: Musika wehwendefa uri kuwedzera wakaita kuti kunzwisisa kunzwisisike muhurdware kwakakosha kana uchigadzirisa webhusaiti kuti igadzire inoenderana nevatengi chiitiko. Iyi infographic inosanganisira ruzivo nezve maitiro etsika evatengi vemahwendefa, kusanganisira imwe yakasarudzika dhata kubva kune nyowani Monetate EQ report.
Tags: komesiecommerceipad kutengesa statsipad kutengaipad yekutenga maitiropiritsi yekutengesakutenga piritsitcommerce
Nei kutsvagisa kweTwitter uye Kuwanikwa KweZVIMWE ZVISIRI izvo Chinja Mutambo